HomeDUNIDAAasiya91 HindiyaMaroodiga Oo Dilaya Tareenka Hindiya
01 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 91 Hindiya, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, VIDEO 0
India tareenka ayaa xiraya kalluunka kalluunka
Maroodiga Oo Dilaya Tareenka Hindiya. Hindiya gudaheeda, tareen xawaare badan ku socda ayaa ku dhuftay shabag kalluun oo ku soconaya biraha. Maroodiga, oo si xun u waxyeeleeyay saamaynta, ayaa u aaday keynta si uu iska haysto. Shilka ayaa ka dhacay Jalpaiguri, Waqooyiga Bengal.
Tareenka rakaabka ah ee ku safrayay Banarhat-Nagrakata ee gobolka Galbeedka Bengal, India, ayaa waxaa ku dhacay is rasaaseyn kadhacaysa wadooyinka. Kza 27 shilka Sebtembar wuxuu ka dhacay 8.30. Fiidiyowga maroodiga ee uu ku dhacay tareenka ayaa murugo weyn ka dhaliyay warbaahinta bulshada. Muuqaalka '45-labaad', waxaa la arkaa in maroodiga, oo dadka daawanayay ay quus ka taagnaayeen, waqti adag ku qaadatay inuu ka soo kaco dhulka oo si tartiib tartiib ah ugu socdo ilaa duurka. Qeybta mashiinka rakaabka ee rakaabka ayaa sidoo kale burburtay darawalkii ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay dhamaadka isku dhaca.
Tareenka Gawaarida ee Elazığ Lose Life ayaa laga helay Nidaamka Dembiga 27 / 03 / 2018 Shilkani wuxuu ka dhacay xaafadda Elazığ iyo xaafadda Kizilay. Sida laga soo xigtay xogta la helay, hooyada 2 oo ah hooyada 53-sano jir ah Velvet Steel oo ka baxday guriga si ay u aadaan xarunta caafimaadka, ayaa isku dayey in ay maraan tareenka tareenka, halka saldhigga tareenka ee Harput ay ku dhufteen tareenka xamuulka. Ma ogaanayo in ay haweenka ku dhuftey iyo ka qaadista saacadaha 1 ka dib markii ay ku noqdaan shaqaalaheeda, tareenka, haweeneyda ayaa u muuqata jidhkeedii. Kaddibna farsamoyaqaanka ayaa loogu yeeray kooxaha caafimaadka iyo booliska goobta. Kooxo caafimaad oo ka soo jeeda goobtii ayaa go'aamiyay in Shiillaha uu dhintay. Ka dib markii baaritaan lagu sameeyey kooxaha falalka dembiga ah, qashin-saarka jirka ee jirkooda aan nooleyn
Qofkii dhaawacmay oo ku dhaawacmay Tareen ku yaal Kayseri 09 / 07 / 2012 Kayseri, qof ayaa ku dhuftay tareen. Qofka yar ee dhaawacmay shilka, ayaa laga saaray isbitaalka kadib daaweyn ka dib. MA ee magaalada Melikgazi Xaafaddaha Bagpınar magacaabay, waxay qaadeen xayawaanka si ay u daaqaan. MA oo ku taalla geeska tareenada, MA, Kayseri, Sivas, jihada maamulka IT iyo garaacday tareenka. Qofka ku dhaawacmay shilka qof yar oo dhaawac ah, Isbitaalka Tababarka iyo Isbitaalka Kayseri. Ka dib markii uu daaweynayay, waa la soo daayay. Xafiiska xeerilaaliyaha ayaa bilaabay baadhitaan, warbixinta dadka ku lugta leh shilka ayaa la qaaday. BT waa la sii daayay kadib markii uu ku dhawaaqay. Waxaa laga soo xigtay: www.haberimport.com
Lo'da 14 ayaa ku dhimatay tareenka xawaaraha sare ee Danmark 02 / 10 / 2012 Marka lo'da ka soo baxda beer ku dhow magaalada Varde ee galbeedka Jylland ee Danmark ayaa ku dhuftay tareenka, lo'da 14 waxaa lagu dilay tareenka xawaaraha sare leh. St. Michael Skaarup waaxda booliska, Jidka haatan tababar qayb ka mid ah lo'da, jarka iska dhaawacmeen halka qayb kale oo uu sheegay in wada baabba'ay masaafad gaar ah, "Ka dib markii uu shil ka Varde iyo adeegga tareenka u dhexeeya magaalada Skjern laguma samayn muddo dheer. Sida lo'da ay ku dhufteen tareenka ayaa ku faafay meel ballaadhan, waxay qaadatay waqti dheer oo tirakoobka ah oo ay ku wargelisay milkiilaha iyo ka saarista lo'da ee la baabiiyay. Milkiilaha lo'da ayaa sidoo kale aad u soo jiitay oo aad u xanaaq badan. Laakiin lo'da ...
Ku dhaawacmay tababarka ee Van | Shil tareen 16 / 11 / 2012 Ilmo ayaa ku dhaawacmay shil tareen ee magaalada Bostaniçi ee magaalada Van. Tareenka xamuulka qaada ee TCDD oo horseedi kara xudduudaha Kapikoy ee xaafadda Saray, oo ah tareenka dayactirka TCDD ee DE 13.00, oo u sii gudbaya magaalada Bostaniçi, 53032-sano jir Ruken Kuruç wuxuu ciyaaraha ku dhuftey. Carruurta dhaawacmay, muwaadiniinta ku sugan xaafada Elementary YNUMX No. Kadib markii waxqabadka koowaad ee halkan Ambulance Van Tababarka Gobolka iyo Isbitaallada RK laga saaray, ayaa la daweeyey. Dhowr askar bilays ah ayaa loo diray goobtii shilkii, qaraabada cunuga ...
RayHaber 01.10.2019 Warbixinta Shirka
Lo'da 14 ayaa ku dhimatay tareenka xawaaraha sare ee Danmark